N'okporo ámá egwuregwu Ian Erix: Official Site
Anyị bụ Official Street Team n'ihi Ian Erix. Anyị bụ ndị a gwakọtara agwakọta nke dị iche iche mba, okpukpe, Ọsọ, nwoke, afọ na sexualities. Anyị bụ ndị a gwakọtara agwakọta nke ọtụtụ dị iche iche n'ụdị, ọtụtụ dị iche iche ndị mmadụ, ọtụtụ dị iche iche omenala na ọtụtụ dị iche iche echiche. Anyị na-mutts. Ọnụ, anyị bụ ndị a mmegharị. Anyị bụ ndị a MUTT agha na anyị niile na-agha. Anyị kweere na freethinking, onwe okwu na inwe ọchị. Anyị anyị n'otu n'okpuru anyị n'anya music na anyị ahuhu n'ihi na ihe niile Ian Erix!!!
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere Ian Erix, pịa ebe a. (Ma anyị na-guessing ma ọ bụrụ na i mere ya a anya, ị maraworị ihe mkpa ka ị mata banyere Ian otú ị pụrụ ileghara na njikọ!). Iji kpọtụrụ egwu ndị enyemaka na-agba ọsọ na jikwaa a mba n'okporo ámá egwuregwu, zipụ ozi email na-: teams@ianerix.com
N'ịgbasa okwu banyere Ian Erix n'ụwa nile na eluigwe na ala! (Ya mere, na-apụ oge na ị na-abata kọntaktị ọ bụla ma ọ bụ ndị ọzọ Martians mmezi-terrestrial ndụ, ị ga-ekwe ka ha mara otú ihe gị n'ime Ian Erix, ọ pụrụ ịbụ nnọọ otu ihe na-azọpụta gị si ghọọ ndị na-adịghị njikere isiokwu nke ọbịa nnwale!).
Ị na-achọ pụtara ndụ? Ndo, n'isonyere a n'okporo ámá egwuregwu ghara Ị kpọghee ekwt niile omimi nke ụwa n'ihi na ị ma na ọ ga-unu nanị ohere Ian Erix ozi ọma na ozi n'ihu onye ọ bụla ọzọ na mbara ala. Ị ga-enweta ohere izute Ian na-aghọ akụkụ nke ya onwe ya entourage mgbe ọ gara obodo gị na njem. More, ị na-aga n'okporo ụzọ na Ian maka otu afọ na ina ụgwọ otu nde dollar. Mma, na na na, na ikpeazụ ikpe na-abụghị eziokwu ... .We ike nro, enweghị ike anyị?!!
Jikọọ Street Team
Biko tinye abụọ ọ bụla ikata * Ihe Nlereanya: 12
Nke a igbe bụ maka spam nchedo - biko hapụ ya ide:
Free zukoro na kelee gafee n'ihi Ian Erix na-egosi mgbe ọ na-abịakwute gị obodo.
Sense nke mpako na ịmara na ị na nyeere Ian Erix ihe ịga nke ọma na ya atụmatụ maka ụwa nchịkwa.
Na-ụbọchị ozi na ebe n'ụwa Ian Erix bụ.
Free Na tiketi maka top n'okporo ámá egwuregwu ndị ndú.
Ndị ọzọ na-egwu onyinye na prizes
OTÚ PỤRỤ unu debanyere ?
Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere Official Street Team n'ihi Ian Erix ma na-a Mutt Army Solider, na-eji ihe ịrịba ama elu ụdị n'elu ịbanye ozi gị ma ọ bụ zipu ozi site na email na isiokwu akara "So Mutt Army" ka anyị mara gị aha, kọntaktị nkọwa ma nke obodo, obodo na / ma ọ bụ obodo ga-amasị gị na-anọchite anya. Ị ga-eziga email: teams@ianerix.com. IHE : I nwekwara ike ike, akwalite na weputara nkuzi gị onwe gị n'okporo ámá egwuregwu, onye ofufe na peeji nke, na / ma ọ bụ ìgwè na saịtị ọ bụla ị na-ahọrọ dị ka Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest, Buzznet, Bebo, Hi5 wdg.
OTÚ PỤRỤ unu ESIRI mpaghara n'okporo ámá egwuregwu MAKA Ian ERIX?
Send email na isiokwu akara "Chọpụta A Team" na- teams@ianerix.com na-eme ka hụ na-agụnye aha gị obodo na mba. Anyị ga-azụ gị dị ka n'oge na-adịghị dị ka o kwere omume na ozi na ezigbo otu ọnọdụ gị.
GỊNỊ na-MEE ezi n'okporo ámá egwuregwu MEE?
1. Dị ka ọchịchị Ian Erix / Mutt Army na peeji nke on Facebook. www.facebook.com/ianerix.muttarmy
2. Jikọọ na Ian Erix na gị niile mmadụ na netwọk profaịlụ dị ka Facebook, Twitter, Vine, Instagram wdg.
3. Tinye Ian Erix paraphernalia ka profaịlụ gị. (ọkọlọtọ, foto, vidiyo, ọkacha mmasị gị Ian Erix song, aha ya ka ọkacha mmasị gị music ndepụta, etc.etc.)
4. Send Tweets bụ nzipu ma ọ bụ post ọnọdụ ozi na Facebook ma ọ bụ ịkọrọ foto na Instagram sị otú egwu ọ bụ ma ọ bụ na-agwa onye ọ bụla na-elele ya na post mgbe ọ na-abịa ka a obodo nso ị.
5. Tinye elu dịkarịa ala, 1 (ma ọkacha mma a ọtụtụ) nke ịma ọkwa / fliers gburugburu obodo na-akwalite Ian Erix. Best ebe ime nke a bụ na obodo music venues, malls ma ọ bụ oyi uwe na-echekwa, kọfị ụlọ ahịa, ụlọ akwụkwọ, buletin mbadamba, wdg.
6. Gwa dịkarịa ala, 3 nke enyi gị na-ejikọ na Ian Erix on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Vine na / ma ọ bụ na ya na ndị ọzọ mmadụ na netwọk peeji nke -; jide n'aka na ha n'ezie enwe ya ụda. Ọ bụrụ na ị n'ezie Na gaa na anya, na-eche free ịgwa gị niile enyi ịgbakwunye Ian. Na hey, na-eche free ịgwa ndị na-abụghị ndị enyi gị ma ọ bụrụ na ị na-eche na ha nwere ike amasị Ian.
7. Watch Ian Erix ọhụrụ vidiyo na YouTube na repost vidio niile ndị enyi gị na-arịọ ha ka ha na-ekiri.
8. Tinye Ian Erix music gị iPod ma ọ bụ ndị ọzọ Mp3 ọkpụkpọ na jidere enyi gị ';s ọkacha mmasị ige ntị na ngwaọrụ ma tinye Ian si music jidesie ha playlist oke! Ịnwere ike ibudata songs si iTunes, Amazon ma ọ bụ kpọmkwem site Ian Erix si na ebe nrụọrụ weebụ na-adịghị anya ị nwere ike tupu-ka ya ọba ọhụrụ si www.ianerix.com
9. Ọ bụrụ na Ian Erix na-abịakwute gị obodo ma ọ bụ obodo dị nso na-egwu a gosi ma ọ bụ gbaa ya TV usoro, gaa ebe mgbakọ na ka nche mara na ị bụ Onye Ndú Street otú ha nwere ike ịtọ unu na ụfọdụ ụtọ elele. Ma ọ bụrụ na ị ibu kechioma, ị pụrụ ọbụna na-kpọgidere na Ian tupu a izi!!!
10.Mkpatụ si ụfọdụ Ian Erix ahịa na ngwá ahịa dị ka a jụrụ oyi ma ọ bụ ịkụ gọlfụ hoodie na mgbe onye ọ bụla Ekele gị ekike, ka ha mara banyere Ian Erix. Awesome ọhụrụ merch ga-dị anya na www.ianerix.com
11. Ebe ma ọ bụ ise na ";itoolu "; logo na okwu "Lelee si Ian Erix" bụla indent-ike / writeable na-ebupụta dị ka gị tebụl n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ mmiri ulo oru mbo ciment na a na-adịbeghị anya n'ezigbo si agafe n'akụkụ ụzọ.
12. Dee "m n'anya Ian Erix!"Na a ojii sharpie ihe nrịbama gafee gị gba ọtọ ozu na streak site na nnukwu ìgwè mmadụ na nnukwu ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ nzukọ.
13. Mee ka a ole na ole puku Ian Erix fliers na kwenye a obodo helikopta pilot efe gị busiest ogbe ndịda uzo na dobe na fliers ala a ọnụ ọgụgụ kasị elu oge.
14. Get a megaphone ma malite egwu ugboro ugboro "Ian Erix" n'èzí ihe, redio, award egosi ma ọ bụ TV netwọk ebe Ian Erix na-adịghị na-akpọ ma ga-.
15. Get a nwa oge egbugbu na aha "Ian Erix" na gị n'egedege ihu na ozi ederede a foto nke onwe gị na-egosipụta ọhụrụ gị tat niile nke kọntaktsị na ekwentị gị adreesị akwụkwọ. *Tịm fiọk: Street Team-eme ga-omume na ọbụ uche nke onye ọ bụla n'okporo ámá egwuregwu otu. Jiri ezi ikpe n'ihi na ọ bụ ezie na Ian Erix ga gị n'anya maka ya, Ohere na-enye anyị na-agaghị enwe ike na ịgbapụta unu si n'ụlọ mkpọrọ ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ maka iwepụ nke ọ bụla na-adịgide adịgide ozu nkà.
Ònye na-agba ọsọ n'okporo ámá a otu?
Ndị Ian Erix Frog dị otú ahụ dị ka onwe gị na ụfọdụ enyemaka a publicist ma ọ bụ abụọ na Ian Erix si management ụlọ ọrụ.
Enwere m ike ịkpọtụrụ Ian Erix site ebe a?
Anyị ga na-agbalị gabiga ozi ọ bụla, akwado nkà ma ọ bụ otuto ị nwere ike n'ihi na Ian, ma ọ bụrụ na ị chọrọ kpọmkwem kpọtụrụ ya na-eleghị anya ọbụna anata a nzaghachi, na-ahapụ onye ikwu ma ọ bụ na-ezitere ya ozi na Facebook ma ọ bụ Twitter bụ eleghị anya, ụzọ kasị mma gaa.
Gịnị bụ Street Team?
A n'okporo ámá egwuregwu a mere nke otu ìgwè nke Frog nke otu gbalaga ahụ ma ọ bụ omenkà, n'okwu a, Ian Erix, na aka kwalite na-ekpughe ha a no n'usoro sara mbara-ege ntị n'ime gị onwe gị obodo, obodo, obodo ma ọ bụ mba. Nke a pụrụ iru site na-ekesa akwụkwọ ọkwa maka ihe na-abịa gosi, ịkpọtụrụ TV na redio na arịọ Ian Erix, na obodo music magazin iji nyochaa ya music ...; wdg.
Ị nwere E-Team?
Yup. Anyị sere mmadụ abụọ ọrụ dị ka ihe e-otu na-atụ anya na ndị nile so na-akwalite Ian Erix online. I nwere ike inyere site agha chee a ọkọlọtọ, buletin, music ọkpụkpọ na gị ịkparịta ụka n'Ịntanet profaịlụ, wdg. Ọzọkwa, site na ịga na music forums, nkata ụlọ, na-agbakwụnye, ihe Ian Erix lyric ma ọ bụ akara gị Na usoro ma ọ bụ nwee na email signatures, izipụ Ian Erix yiri njikọ enyi, ekesa e-kaadị wdg. The ohere na-adịghị agwụ agwụ. Nwee ihe, ma cheta, ọ dịghị onye nwere mmasị n'ebe a spammer.
Ndi ọ na-eri ihe ọ bụla na-abụ onye so na Street otu?
Nope, ihe ọ bụla! Otu bụ kpam kpam FREE! Naanị ihe ọ ga-eri na ị bụ bit nke oge gị na ntinye.
My obodo / mpaghara / obodo ugbua nwere n'okporo ámá egwuregwu. Enwere m ike ka iso?
Edinam akpanikọ ada. Anyị kwesịrị niile na-akwado anyị pụrụ inwe. Anyị ga-ịme ka ị ndị ọzọ n'okporo ámá egwuregwu ndú / s na ị nwere ike ịkekọrịta ọchị na-akwalite Ian Erix gị obodo.
Ị na-ka n'aka ihe na-eme iji na-akwalite? Lee ụfọdụ aro!
Ị pụrụ ịmalite site na-agwa ndị enyi gị iji chọpụta Ian Erix wee si n'ebe ahụ. Okwu ọnụ akwado ka a oké isi ka ndị mmadụ na-ege ntị ka Ian si music.
Post na Ian si mmadụ netwọk na peeji nke na music forums ma ọ bụ na ọ bụla Ian Erix metụtara peeji nke na / ma ọ bụ na ihe ọ bụla ọzọ dị iche iche ma ọ bụ profaịlụ-agwa ndị mmadụ na i kere a otu maka gị n'ógbè. Ma ọ bụghị, nnọọ biputere banyere rụrụ ọrụ na bụ Ian Erix na gị mmadụ netwọk na peeji nke na / ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nke otu netwọk na peeji nke, otu ma ọ bụ blog i nwere ike na post na ihe ọ bụla ọzọ online nwee.
Watch ya music vidiyo na YouTube na biputere njikọ ndị ahụ maka ndị enyi gị ịhụ. Tell your friends to watch his videos, subscribe to his YouTube page, follow him on Twitter, Instagram, Vine and/or like his official Facebook page!
I nwekwara ike ịchọ gị mmadụ netwọk n'ihi na ndị mmadụ na gị obodo / mpaghara / obodo na enyi na-arịọ ha ma ọ bụrụ na ị na-eche na ha ga-lelee Ian Erix na-esonyere gị n'okporo ámá egwuregwu.
Bipụta ụfọdụ akwụkwọ ọkwa na ịjụ music echekwa, uwe na-echekwa, kọfị ụlọ ahịa, ma ọ bụ obodo music venues ma ọ bụrụ na i nwere ike ịhapụ ụfọdụ n'ebe ahụ n'ihi na ndị ọzọ na-. Ma ọ bụ jụọ ha ka ha ma ọ bụrụ na i nwere ike biputere a flyer na ha ụlọ ahịa. Kasị ebe nwere bulletins mbadamba (I.E. ụlọ akwụkwọ, na-asa ákwà ebe, wdg) otú i nwere ike biputere ha n'ebe ahụ. Don ';T gị n'iyi akwụkwọ ọkwa, họrọ ebe ka biputere ha ma ọ bụ n'aka ha nke ọma. Jiri gị mma ochie ọsọ uche!
Enwere m ike ịkpọtụrụ gị maka inwetakwu ihe ọmụma ma ọ bụ ịjụ ajụjụ? Chọpụta! Dị nnọọ eziga anyị email na teams@ianerix.com na anyị ga-agbalị ime ka ngwa ngwa dị ka omume. Ma ọ bụrụ na anyị na-arụsi ọrụ ike na-ege ntị Ian Erix music, na-ekiri ya na vidiyo ma ọ bụ opipia ihu ya n'ime n'akụkụ Ugwu Rushmore, anyị nwere ike iri obere ogologo-alaghachi azụ gị!